Wasiirka Cadaaladda XFS”waxaan xoogga saaraynaa in shacabka uu helo adeeg caddaaladeed”(Sawirro) | Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed
Wasiirka Cadaaladda XFS”waxaan xoogga saaraynaa in shacabka uu helo adeeg caddaaladeed”(Sawirro)
Baydhabo(SONNA) Wasiirka Cadaaladda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya mudane C/qaadir Maxamed Nuur(Jaamac) oo la hadlay wakaaladda SONNA ayaa ka warbixiyay qorshayaasha ugu degsan wasaaraddiisa dhanka horumarinta adeegyada Garsoorka iyo Cadaaladda Dalka.
Wasiirka oo safar ku jooga magaalada Baydhabo ee xarunta KMG ah ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa booqday xabsiga Dhexe ee Baydhabo iyo xabsi cusub oo uu ku socdo dhismo,waxaana ku wehliya kormeerkaasi Wasiirka Cadaaladda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed.
Isagoo ka hadlaya ahmiyadda Cadaaladda ayuu sheegay in ay yihiin aas aaska dowladnimo,la’aantoodina horumar amni,mid bulsho iyo dhaqaale midna hagaagaynin.
“Waxaa ii qorsheysan in la hormariyo dhamaan haydaha garsoorka Federalka iyo Maamul goboleedyada 2021 da waxaa noo qorsheysan in aan dhisno xabsiyo casri ah dhameystirnana kuwa hadda socda sidoo kale inaan tayeyno dhamaan garsoorayaasha iyo xeer ilaalinta iyo dhismooyinka maxkamaduhu ku shaqeen lahaayeen”. Ayuu yiri wasiirka Cadaaladda XFS.
Wuxuu sidoo kale intaasi ku daray in ka wasaaradda ahaan ay dadaal ku bixin doonaan sidii shacabka Soomaaliyeed loogu dhoweyn lahaa adeegyada Cadaaladda.
Wasiir Jaamac ayaa waxa uu la kulmay howl wadeenada wasaaradda cadaaladda ee KGS, Wuxuuna bogaadiyey shaqada cadaaladeed ee ka socota guud ahaan koonfur galbeed gaar ahaan xafiiska wasaaradda.
Wasiir jaamac aya sido kale tilmaamay in wasaarada cadaalada DFS ay dadaal ku bixinayso sidii shacabka dowlad gobaleedka konfor galbeed ay ugu xaqiijin lahayd hannaan caddaaladeed oo hufan, isagoo warbixinno la xiriira howllaha adag ee ay u hayaan bulshada ka dhageystay masuuliyiinta ugu horeeyo wasiirka wasaaradda cadaaladda KGS iyo taliyaha ciidanka asluubta KGS.
Gabgabadii socdaalka uu ku yimid wasiir (jaamac) ayaa waxaa uga mahadceliyey Wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka DG KGS mudane Maxamed Xuseen Xasan (John)
Previous articleRa’iisul Wasaare Rooble oo ka qeyb galay Aaska Saraakiishii Qaranka ee ku shahiiday Qaraxii Gaalkacyo “SAWIRRO”
Next articleWasiiru dowlaha Ganacsiga oo daah-furay shirka madasha labaad ee horumarinta dhoofka “SAWIRRO”
Wasiirka Gaashaandhigga oo Muqdisho shir uga furay guddi ka soo shaqeynaya ...